Mpanamboatra sy mpamatsy fitaovana Ancillary - Factory Ancillary Equipment China
Ny rafitra AS / RS mazàna dia misy faritra maromaro toy ny rafitra Rack, rindrambaiko WMS, ampahan'ny haavo WCS ary sns.
Izy io dia raisina an-tanana amin'ny sehatry ny famokarana fanafody sy sakafo maro.
Ity fitaovana ity dia azo ampiasaina amin'ny fanafody, sakafo, indostrian'ny simika, fitehirizana akora simika. Manana endrika bika aman'endrika, fandidiana mora, ny tanky dia misy lohan'ny fanadiovana mandeha ho azy, mba hiantohana ny fanadiovana tanteraka, ireo fitaovana ampiasaina amin'ny SUS304 na SUS316L, miaraka amin'ny fitaratra miloko na matte amin'ny tampony, mifanaraka amin'ny fenitra GMP.
Ny sterilizer fandroana rano dia mampiasa rano miodina amin'ny hafanana avo lenta ho mpanelanelana amin'ny sterilization, ary manao fandidiana sterilizing mandatsaka rano amin'ny tavoahangy LVP PP. Miaraka amin'ny fitaovana fiarovana fanoherana tsindry, azo ampiharina betsaka amin'ny fiasa sterilizing maripana avo lenta sy ambany amin'ny rano ao anaty tavoahangy fitaratra, tavoahangy ampoule, tavoahangy plastika, kitapo plastika sns amin'ny sehatry ny pharmaceutika. Mety ihany koa ho an'ny indostrian'ny sakafo ny fanamorana ny karazana fonosana, zava-pisotro, kapoaka sns.